Hiran State - News: HS:- Wasiirada iyo xildhibaanadii dhawaantan gaaray Hiiraan oo taagero shacab ka helay bulshada Hiiraan
HS:- Wasiirada iyo xildhibaanadii dhawaantan gaaray Hiiraan oo taagero shacab ka helay bulshada Hiiraan
HS:- Magaalada Mogdisho waxaa ku sugan siyaasiyiin iyo waxgarad dhawaantan ka yimid Hiiraan iyagoona halkaasi kula soo kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan soona qaabeeyey maamul ay ku mideysan yahiin bulshada Hiiraan.
Siyaasiyiintaan ayaa gudaha Hiiraan ku heysta taageero fara badan maadama ay Hiiraan u tageen sidii ay ula soo tashan lahaayeen waxgaradka ku sugan gudaha iyagoona aaqirkii isla meel dhigay in Hiiraan loo dhiso maamul cusub xiriir fiicana la leh dowlada kumeel gaarka si dalka looga xoreeyo kooxaha argagixisada ah, inaksta oo ay waxgaradka iyo bulshada Hiiraan doonayan inuu hogaamiyo iyaga mid ka mid ah xildhibaanadii ciidanka la joogay buuraha oo shacbiyad badan ku leh bulshada Hiiraan.
Hadaba maxaa hor taagan maamul u sameynta Hiiraan?
Maamul u sameynta Hiiraan wey ka soo dhamaatay xildhibaanada iyo wasiirada reer Hiiraan ugu jira dowlada kumeel gaarka marka laga reebo dhawr xildhibaan oo caada qaatayaal ah qurba joogta reer Hiiraana u yaqaanan (Pay to Go MP) kuwaasi oo aan Mogdisho u joogin danta bulshada Hiiraan iyagoona diida waxkasta oo ay reer Hiiraan isla meel dhigaan si ay meesha uga baxdo danta guud ee bulshada Hiiraan.
Kadib markii ay ka soo dhamaatay howshii masuuliyiintii kale ee dowlada ayaa waxaa is hortaag ku sameeyey madaxweyne Shariif oo isagu laga soo xigtay inuu yiri madoonayo in ciidamada Ethiopia soo dhaafaan magaalada Belet Weyne ilaa Hiiraan qofka hogaaminaya uu yahay qof horey uga tirsanaa midawgii maxkamadaha Islaamiga amaba la soo shaqeeyey.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri koofurta Soomaaliya waxaa ka shaqeynaya oo kaliya maamulo ay hogaaminayaan ragii dhiiga u soo daadiyey dalkaan ee la dagaalamay gaalada ilaa mantana dagaalka kula jira.
Sikastaba madaxweyne Shariif oo ku fashilmay siyaasadii guud ee dalka dhawaana ay kalsoonidii kala laabteen beesha Mudulood ee ku nool dalka Kenya waxkasta oo uu isagu wato Hiiraan kama shaqeynayaan maadaama ay siyaasadiisa kusoo aruurtay mujaahidinta iyo yaa maxkamadahii silaamiga la soo shaqeeyey.
Mar uu sir culus qarxiyey madaxda Dooxada Shabelle habeenkii xaleyto ahaa ayuu yiri Shariifka waxuu wasiirada reer Hiiraan ku dhahay Hiiraan waxan doonayaa in aan u magacaabo ninka hada hogaaminaya Dooxada Shabelle dhinaca kalena nin ka tirsan xerta Alaa Shiikh ayuu leeyahay waxaad noqoneysa qofka hogaaminaya Hiiraan, isagoo hadalkiisa sii wata waxuu yiri Shariifka isagaa gacantiisa isku qarxinaya waayo beesha caalamka ayaa fiirsaneysa xaalada Hiiraan marka waxii dhaliil ah isagey dib ugu soo laabaneysaa ayuuna sii raaciyey waayo ayuu yiri ninkasta qorshaha uu Shariif wato mid ka duwan ayuu wataa ayuuna yiri.
Si kastaba siyasadaha guracan ee Shariifka marka laga soo tago waxaa dhinac socda in qofkasta oo reer Hiiraan ah oo uu la kulmo Shariifka waxii uu kala kulmo uu gaarsiinayo wasiirada iyo xildhibaanadii dhawantaan Hiiraan ka yimid oo iyagu aad ugu xiran waxgaradka jooga gudaha Hiiraan iyaguna meesha ay wax marayan u gudbiya waxgaradka.
Hadaba yaa loo maleynayaa inuu Hiiraan hogaamin doono?
Hiiraan waxa hogaminaya 3 qofood midkood.
1- Nin ka mid ah qurba joogta oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah wasiirada reer Hiiraan ugu jira dowlada kaasi oo sida lagu soo waramayo hadii uu xilkaas qabto ay sahlanaan doono iney soo laabato midnimadii ka dhaxeyn jirtay reer Hiiraan iyo Soomaaliweyn, inkasta oo uu Shariifka shaqsigaasi ka qabo xasaasiyad maadaama uusan dalka u rabin inuu hogaamiyo amaba xil ka qabto qof dalka iy degaanka uu ka soo jeedo ka naxaya hadii uusan qofkaasi aheyn qof ku xiran kooxo diimeedyada dalka ka jira.
2- Ninkani waa nin dhalinyaro ah waana ninka hogaminaya hada Dooxada Shabelle waana nin cod kar ah inta badan waxaa looga soo horjeeday magaca Dooxada Shabelle ee uu la baxay laakinse isagu ujeedo kale kama leh Hiiraan waxuu doonaya in uu siyaasada ku galo qaabkii uu ku koray Shariifka hada madaxweynaha ka ah Soomaaliya, Shiikh Shariif iyo isagana midkasta ujeedo u qarsoon ayuu wataa sida.
Shiikh Shariif waxuu doonaya in ninkaan dhalinyarada ah laga dhigo amaba loo dhiibo Hiiraan hadii uu guuldareysto in laga aqbalo nin ka tirsanaan jiray ururka AL itiraad oo hada ka tirsan garabka kooxda Alaa Sheekh oo uu doonayo inuu miiska soo saaro daqiiqadaha ugu danbeeya, waxaana Shariifka ka dhaadhacsan inuu danta uu ka leeyahay Hiiraan ka fushan karo ninkan dhalinyarada ah laakisne marka dhinaca kale la fiiriyo xaaladu waa ka bedelan tahay sidan uu Shariifka moodo.
Madaxa Dooxada Shabellena waxuu xog ogaal u yahay naceynka uu Shariifka u qabo bulshada Hiiraan gaar ahaan beelweynta uu ka dhashay marka isagu waxuu madax ka yahay urur siyaasadeed amba xubin fir fircoon ka yahay waxkasta uu Hiiraan taladeeda kula wareegi karo hadey ku xiran tahay Shariifka iyo masuuliyiinta dowlada ugu jirto reer Hiiraan wuu sameynayaa si ay Hiiraan ugu howl galaan urur siyaasadeedkaas inkasta oo aanu dooneyn in aanu hada magaca ururka Sheegno maadaama uu madax ka yahay ururka shaqsi caan ka ah Soomaaliya.
3- Ninkaan sedaxaad waxuu ka tirsanaa ururka Itixaad waana wadaad xag jir ah ujeedada isaga iyo Shariif ay wataane waa in masuuliyiin sar sare oo horey uga tirsanaa midawgii maxkamadaha Islaamiga oo hada ka tirsan Shabaab la siiyo goobo nabadoon oo lagu qariyo hogaamiyaashaas.
Laakinse waxaa jira nin isaguna ah xildhibaan oo ay 99% doonayaan shacabka Hiiraan dal iyo dibad kaasi oo taageero badan ka heysta ciidamada Hiiraan iyo waxgaradka iyadoo la sheegay waxa ay bulshada Hiiraan ku jeclaadeen kuna aamineen iney ka mid tahay inuusan waligii kala hadlin dan tiisa gaarka ah uu markasta isagu jecel yahay danta guud si loo helo Soomaalinimo iyo dowlad hanan karta qalbiga bulshada Soomaaliyeed xildhibaankaas oo lagu shegay magaciisa Waare. waxeyna dhinaca wadaniyada iskaka mid yahiin baa la leeyahay shaqsiga qurbaha ka imaanaya ee ay soo jeediyeen wasiirada Hiiraan qaarkood.
Dad badan waxey sadaalinayaan dhinackasta in laga guleysan doono Shariifka maadama dadku hada dhinackasta xog ogaal ka yahiin Hiiraana waxey noqon doontaa meesha si rasmi ah uu ugu fashilmi doono Shariifka inta ka dhiman mustaqbalkiisa siyaasadeed.
Mar aanu la xariirnay mid ka mid ah waxgaradka Hiiraan oo ku sugan magaalada Belet Weyne sidey u arkaan maamulkan lala soo daahay, waxuu yiir inagu dhulkeena ayaanu joognaa meel aanu u deg degeyno ma jirto waxa Mogdisho ka socda iyo damaca Shariifka ku jirana daqiiqad daqiiqad ayey noola soo socodsiiyaan wasiirada iyo xildhibaaanada dowlada ugu jiro reer Hiiraan cidkasta oo Hiiraan loo soo magacaabane waanu soo dhaweyneynaa xitaa hadii uu yahay shaqsi uu Shariifka maskaxda ka heysto waanu ka tir tirneynaa fikirkaas iyo siyaasadahaas quracan ee uu Shariifka Mogdisho la joogo ayuuna yiri waxuuna hadalkiisa ku soo qatimay inuusan la yaabaneyn siyaasad xumida Shariifka heysata laakinse uu aad ugu wal walayo colaada uu Shariifka marka uu meesha ka tago ku reebi doono beeshiisa hadii uu sidan ku sii socdo iyadoo laga wada dhegersan yahay xumaanta xad dhaafka ah iyo naceybka ka muuqada Shiikha ayuuna hadalkiisa ku soo qatimay.
Sikastaba wasiirada iyo xildhibaanadii Hiiraan ka yimid dhawantaan marka aad Hiiraan la xariirto iyaga iyo Madaxwyne Shariif waxaa dowladnimo diyaar u ah oo in shacabka Hiiraan iyo dowlada isku xirmaan diyaar u ah iyaga halka madaxweynahii dhamaa uu waxkasta sharuud ugu dhigay bulshada hadii aysan maamulada gobolada hogamineyn qof ka soo jeeda maxkamadahii Islaamiga waxaan doono ayaan ku ciyaarayaa iyo wax la mid ah
Hiiraan waxaa ka soo ifaya mustaqbal maamul kasta oo loo soo magacaabane xitaa hadii uu hogaaminayo madaxda Dooxada Shabelle waa la soo dhawynayaa sida ay aaminsan yahiin waxgaradka Hiiraan ku nool iyo inta badan qurba joogta reer Hiiraan kuwooda aan aaminsaneyn qabiilka iyo jahliga.
Wararkii ugu danbeeyey ee Shariifka naga soo gaarayana waxey shegayaan in Shariifka isku buuqsan yahay waxeyna hada siyaasada maanta ka mareysaa hadii aysan ilaa berito wax badan iska bedelin inuu yiri.
1- Ma jirto maamul Hiiraan loo sameynayo inta uu ka soo dhamaanayo shirka London.
2- In waqtiga lagu dheereeyo ciidamada Ethiopia oo doonaya iney horey u socdaan marka maamulka lagu dhawaaqo taasi bedelkeedana maadaama uu Shariifka ku xiran yahay amaba ka tirsanaan jiray iyaga ma jecla in la wiiqo awooda Shabaab iyo Al qacida.
3- Inuu radio Mogdisho geeyo shaqsi uu isagu wato oon ku imaan wadatashi sidaasina lagu shaaciyo mar dhaw maadama uu isagu siyaasadiisa ka sameysan tahay qas iyo fowdo.
· admin on February 14 2012 12:29:04 · 0 Comments · 2514 Reads ·
14,633,762 unique visits